Ukuze ube kuwebhu, isayithi alanele: liqinisekisiwe
Ukuba kuwebhu: indawo ayanele.
Umthetho wokuqala we ube khona kuwebhu ukuba nesiza esihle, esibonisa kahle ibhizinisi lakho nesitayela sakho. Kepha lokhu akwanele futhi siyakuqinisekisa ngoba, eminyakeni edlule, sikuzwisisile ukuthi indlela ebheke kokuyiyo iyinkimbinkimbi kangakanani ukubekwa Inethiwekhi.
Ngabe ufuna ukukhuphuka iGoogle noma intaba? Ukuze ibhizinisi lakho libe ngcono kuqala
Kuvela ku-Google: isu lokuwina lebhizinisi.
Uma usomabhizinisi noma uqhuba ibhizinisi lakho, ngokuqinisekile bazobe bekutshele ukuthi kubaluleke kangakanani namuhla sikala iGoogle. Kepha kusho ukuthini ukukhwela -Google futhi kungani ibaluleke kakhulu ebhizinisini lakho?
Isibonelo singacacisa umqondo ...
Uzibeka ku-Google bese uyonga. Akusilo isimanga: yiTrovaWeb
ITrovaWeb ikukhombisa ukuthi ungazibeka kanjani kuGoogle.
Ngokuqinisekile nizwile ngo ukubekwa ukulandela izinjini zokucinganoma okungcono kunalokho okukhona namuhla 'yiba khona' ekhasini lokuqala le-Google.